ဗိသုကာနှင့် ပတ်သတ်၍ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ချဉ်းကပ်မှုအနေဖြင့်ဒူဘိုင်းသည်ယခုနှစ်အကုန်တွင်ပြီးစီးမည့်စီမံကိန်းအမြောက်အများရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ သူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေကိုကမ္ဘာမှာထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေးနိုင်မယ့် floating villas.
'Floating Seahorse' အဖြစ်နှစ်ခြင်းခံပြီးသောအိမ်များသည် (ကမကထပြုသူ Kleindienst အရ) က တွန်းအားမပါဘဲ chalet နှင့်လှေအကြားစပ် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 180 တန်ချိန်။ ရွေးချယ်ထားသောနေရာ? El Mundo ပတ်ပတ်လည်ရှိရေများသည်လေ မှနေ၍ ကမ္ဘာ့မြေပုံကိုဖန်တီးထားသောအတုကျွန်းများ ၃၀၀ ရှိသည်။
အဆိုပါ houseboats သုံးထပ်ထားရှိရေးပါလိမ့်မယ်။ အပေါ်ပိုင်းနှစ်ခုက jaccuzi၊ al fresco ထမင်းစားခန်းနှင့်နေပူရန်အတွက်နေရာနှင့်အခြားသာယာအဆင်ပြေမှုများအကြားအပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားသောမီးဖိုချောင်ကိုပေးလိမ့်မည်။ အထင်ကြီးစရာအကောင်းဆုံးနေရာမှာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက်တွင်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်တစ် ဦး အိပ်မောကျခြင်းနှင့်တူသောသူဖြစ်ရမည်ဆိုပါစို့ ဖန်နံရံများကဝိုင်းရေအောက်မာစတာအိပ်ခန်းသန္တာကျောက်တန်း၊ ငါးနှင့်ပင်လယ်လိပ်များကိုတွေ့နိုင်သည်။
အိမ်များရေပေါ်မျောပါလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောရေလှောင်ကန်များဖြင့်ကူညီသည့်နေရာတွင်ပင်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ၎င်းကို Marina ၏စီမံခန့်ခွဲမှုမှဖယ်ရှားပြီးပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးလိမ့်မည်။ အိမ်နီးချင်းကျွန်းများမှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည် ဆိပ်ခံတံတားမှတဆင့်။
သင်၏အားလပ်ရက်အားဖြည့်ရန်အတွက်ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ရှိသင့်ကိုယ်ပိုင်ကျွန်းကိုဝယ်ယူရန်စိတ်ကူးရှိပါက 'Floating Seahorse' အိမ်ခြံမြေများရောင်း ၀ ယ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်အိမ်ခြံမြေတစ်ခုစီ၏စျေးနှုန်းနှင့်အတူသင်စိတ်ဝင်စားရန်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည် ပေါင် ၂၃ သန်း.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » အချိန်အား » စိတ်ကူးယဉ်ဇိမ်ခံပစ္စည်း - ဒူဘိုင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနစ်မြုပ်နေသောရေပေါ်အိမ်များ